VAKY BANTSILANA : Miletsy ny fahamarinana… | NewsMada
VAKY BANTSILANA : Miletsy ny fahamarinana…
Ny fahendren-drazantsika milaza fa ny hosy be rano mahavery ny bainga, ny ala mahavery ny akanga ary ny lainga mahavery ny marina. Anisan’ny nivoaka tamin’ny fanambaran’ny Eveka, ny herinandro lasa iny, “fa difotry ny lainga sy fitaka ny fiainam-bahoaka”. Mahazo laka tanteraka ny ratsy tsy an-drenivohitra tsy any ambany ravinkazo rehetra any. Manao fanafihana amin’ny antoandrobenanahary ny jiolahy tetsy Anatihazo, ny faramparan’ny herinandro teo. Tsy vitan’ny mandroba fa mbola mandratra amin’ny antsy sy ny basy ihany koa. Very fanahy mbola velona tahaka ny valala voatango ny fiainam-piarahamonina…
Ireo mpitondra amin’izany rehetra izany, tsy hita ny tena laharam-pahamehan’izy ireo. Mivadibadika toa lela may amin’ireo heverina ho fampandrosoana ny tena fiainam-bahoaka. Tsy hita ho antenaina ho filamatra amin’ny fahamarinana. Tafiditra amin’izany ny “Raharaha Razaimamonjy”. Toa mizana tsindrin’ila ny fampiharana ny tany tan-dalàna. Manjaka aza, ny fifampiarovana sy ny kilaingalainga. Ireo mpitsara heverina fa mikatsaka mampijoro ny fahamarinana, anaovana tambabe sy hitadiavana hoditr’akondro. Ampanjakaina ny volo hala? Voalaza ombieny ombieny fa ny manaratsy ny tsara, manao volo hala ary ny manatsara ny ratsy, olom-boasisika.
Voasisika tany anaty filankevitry ny governemanta tany fa andraisana fepetra ireo heverina fa miady amin’ny fahamarinana. Firifiry tokoa moa no efa nandraisan’izy ireo fepetra? Ohatra amin’ireny ny vahoakan’i Soamahamanina niaro ny tanindrazana tsy ataon’ny vahiny tantely afa-drakotra ny harena ao aminy. Fepetra noraisin’izy ireo ny fampidobohana am-ponja ireo mpitarika. Ampanjakaina sy anaovana fampitahorana amin’ny vavabe, ny vavabasy sy ny vavafonja? Misy hatrany ireo mpitondra miray tsikomba sy matin-kanin-kely ka manome mora foana fahazoan-dalana ireo vahiny hitrandraka. Ireo efa mitrandraka aza, zara raha misy ambilombazana no anjaran’ny Malagasy teratany. Miletsy tanteraka ny fahamarinana…
Tsy marin-toerana intsony ny fiainam-bahoaka. Manjaka ny zarazarao anjakana, ny adilahy politika, difotry ny fahantrana ny fiainam-pianakaviana. Na ahoana na ahoana, fositra iray mahatonga ny tsy fahamarinana hanjaka ny toa izany, ny tsy fandraisan’ny fitondram-panjakana fepetra amin’ny fampidinana ny vidim-piainana, amin’ny ankapobeny. Mihevotrevotra sy miedinedina ivelany amin’ny tsy laharam-pahamehana no betsaka. Toa malaza ho be raharaha ny mpitondra, saingy ny voly vary indray no hadino. Ny fanomezana tombondahiny ireo solombavamihinana aza no niseho, tamin’iny herinandro iny. Tahotry ny seza hiozongozona? Raha tsy misy ny fitsinjovana ny fiainam-bahoaka marina, sady tsy hanjaka ny “fahamarinana”, ny firenena mizotra mankany amin’ny “fahavarinana”…
Nitondra fanampiana ho an’ny any Toamasina ry zareo Sinoa 28/05/2020
Fanatsarana sy fanadiovana ny tanàna: narodan’ny CUA ireo tsena tsy manara-dalàna 28/05/2020
Avadibadiho impito ny lela… 28/05/2020
Tsy nandaitra ny ody bala: mpimasy iray maty voatifitry ny zandary 28/05/2020
Toamasina: mpiasa iray eo anivon’ny fitsarana fiarakodia tratran’ny Covid-19 28/05/2020